Resaky ny mpitsimpona akotry : tontam-boka | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : tontam-boka
Tsy afenina intsony ny fahasahiranan’ny fanjakana. Matetika ny fahenoana filazana momba ny fitsitsiana tsy maintsy atao noho ny fisedrana ny tsy fahampian’ny vola. Asa anefa izay antony mahamaimaika ny fitondrana handray fanapahan-kevitra amin’ny fanaovana raharaha izay heverin’ ny maro fa tsy tokony hihazakazahana eo anivon’ny zavatra miendrika atao ankamehana.
Natao ireny ny fanaovazana permis de conduire sy carte grise tamin’ny alalàn’ny karatra sarotra sandohana noho izy ireo mirakotra famantarana azy miankina amina teknika elektronika. Mbola tsy tanteraka daholo fa nohalavaina ny fe-potoana. Tany am-piandohana, fandrahonana toy ny inona no nentina nanaovana fandodonana. Raha tsy mbola manana ilay fitaovana fanavahana ny tena karatra sy ny tsy izy ny mpisava dia menaka ahoso-bato fotsiny ny taratasy lazaina ho filamatra elekitrônika. Ahoana moa no hahafahan’ny polisy na zandary mahafantatra na tena izy na sandoka ilay taratasy atolotra azy raha toa ka tsy manana fitaovana manokana hanampy azy amin’ny fikarohana ny fahamarinana eo amin’ ny lafiny tekinika izy ? Inona ary no nahamaika raha tsy mampiova ny fahafahan’ny olon-dratsy mamitaka amin’ny taratasy sandoka ?
Hafahafa noho izay ny momba ny fanapahan-kevitra namoaka vola taratasy vaovao na samy tsy maika aza ny antony nanaovana azy. Tsotra anefa, samy taratasy na samy nampandalovana trano fanontana atao hoe imprimerie. Asa manokana lafo dia lafo vidy mihitsy ny fanontana an’izany. Vola mbola mandifotra noho izay tonga ao an-tsaina izay. Ao Afrika, misy firenena iray izay voafitapitaka tamin’io fanavaozana kara-panondro io. Mitondra faisana mihitsy ny fanjakana. Ny fananan’ny firenena rehetra any ivelany no voagejan’ ny fitsarana… Sanatria ve dia izay fahalafosana izay no nahatonga fakampanahy ? Asa, arakaraky ny fivangovangony no mampisy lanjany ny ra mipitika. Dia hamaivanina atao ady koropaka tsy asiana fandinihana daholo ve izao raharaha rehetra mampanantena pitik’afo izao ? Marina fa manakaiky isan’andro ny fifidianana ary araky ny vinavinan’ ny mpanao vinany dia miliara anjatony no ilaina mba ahafahana manana vintana ho lany amin’ny fifidianana Filohampirenena. Iza amin’ireo mikasa hilatsaka no manana izany? Ary raha mahita moa ve afaka hanambara mazava ny tsirairay mikasika ny fihavian’ny vola eo aminy?